४७ खर्बको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : कसरी बन्दैछ, कति समय लाग्छ ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १५ चैत्र २०७४, बिहीबार ०९:०० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । वाम गठबन्धनले चुनाव अगाडि बनाएको घोषणापत्रमा आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा दाबी छ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने पनि बताइएको छ ।
यसरी बन्छन् कानुन
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए । सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त…
नरशमशेर, जसको एउटा झोकले नेपालको पहिलो अनधिकृत लिग फुटबल अपूरो रह्यो !
काठमाडाैं । राणाकालमा खेलकुदमा सक्रिय…
काठमाडौं । नाताले बहिनी पर्ने बालिकामाथि एक युवकले बलात्कार गरेका छन् । बलात्कार अभियोगमा तनहुँको घिरिङ – ४ गड्यौलीका…
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ११४ पदमा कर्मचारीको दरखास्त आब्हान गरेको छ।
आज अर्थात २०७५ साल कार्तिक…
चीनले भन्यो, नेपालमा कामभन्दा कुरा धेरै भयो
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयलाई लिएर नेपालमा चलेका टिप्पणीप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ। केही समयअघि काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा…